DAAWO: Waxgaradka G Barri “Deni sharuud la’aan kusii daa Odayaasha dhaqanka iyo Ganacsatada xiran”.
July 20, 2019 NEWS 2
BOOSAASO(P-TIMES)- Waxgaradka, Odayaasha iyo qeybo kala duwan oo katirsan bulshada gobalka Barri ayaa cambaareeyey talaabada ay Xukuumadda Puntland ku xirxirtay qaar kamid ah Guddiga dhismaha wadada laamiga ah ee dhexmarta magaalada Boosaaso, waxayna sheegeen in uu yahay ficil uusan ka muuqan hab dhaqan dawladnimo.
Odayaashan oo ku shiray magaalooyinka Carmo & Boosaaso ayaa sheegay in ay talaabadaas tahay mid kasoo horjeeda Dastuurka iyo dawladnimada Puntland, loona baahan yahay in la dhawro dadka Ixtiraamka leh.
Madaxweynaha Puntland ayay ugu baaqeen in uu sharuud la`aan kusii daayo odayaasha xiran oo ay sheegeen in uu isagu amray in lasoo xiro, waxayna diideen in ay celiyaan lacag uga timi dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
HALKAN KA DAAWO QEYLO DHAANTA WAXGARADKA
Dadka hadlay ayaa sheegay in lacago badan ay ka qaado ganacsatada iyo shacabka Puntland dawladdu, aana la aqoonin meel ay ilaa hadda marto, markii ay waxba ka waayeen dawladda Puntland ay go’aansadeen in ay lacagtooda ku dhistaan wadada laamiga ah ee magaalada dhexmarta, cid kasta oo caawinaysana ay ka qaadanayan kaalmadeeda.
Puntland ayaa xabsiga dhigtay sadex qof oo kamid ah guddiga dhismaha wadada dhexmarta magaalada Boosaaso, ka dib markii ay heleeen lacag gaaraysa 150Kun oo Dollar, taas oo katimi dawladda Faderaalka Soomaaliya, horeyna uu u balan-qaaday Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, mar uu safar ku tagay gobalka Barri.
War qas iyo Maamul la,aan bey rabaan. meela kalena waa laga soo buufinayaa. waxa fiica in sharciga la mariyo, waa hadii la doonayo in maamulka sii jiro Puntland. soconmeyso in qof kastaa wuxuu doono ku hadlo.
Haddii uu Dani sii daayo nimankii xamar u tilaabay oo misana ku indho adagy waa in uu iska casilaa masuuliyada uu hadda noo hayo.Haddii uu Dani yeelo hadalada raqiiskaa ee laga soo sheegayo Odayaasha boosaaso ee xamar laga soo riixayo kuma habboona in uu sii ahaado madaxdweynaha maamul gobaleeda puntlaan.Odayaashu waxba lama socdaan oo warba kama hayaan dhagarta laga soo maleegayo xamar ee ay soo aliftay USC.Odayaasha boosaaso waxay u qabaan in ay xamar ka jirto dawlad soomaaliyeed.Xamarna dawaladi hadda kama jirto oo waxaa inta badan maamusha AL-shabaab iyo kooxo USC ah oo qaran diid ah